Indlela yokubhala i-SEO umxholo onobungane ngam?
Xa uphucula ubukho be-intanethi kwindawo yakho, kufuneka uqinisekise ukuba unamasu abalulekileyo afunyenwe ukuqinisekisa ukulungiswa kakuhle kunye ne-SEO-friendly content. Ukubhala umxholo omhle kulula. Nangona kunjalo, kufuneka wenze umsebenzi onzima wokuqinisekisa ukuba umxholo wakho ubeka phezulu kwiinjini zokukhangela. Ukwenza umxholo wakho uhlelwe kakuhle kwaye ubonakale kwibhokisi lokukhangela, kufuneka ulandele imigaqo ethile yokuphuculwa komxholo - high backlinks. Akungabazeki, kuthatha ixesha ukwenza i-intanethi efanelekileyo kakuhle kunye ne-SEO-friendly website. Nangona kunjalo, ngeendlela ezihlakaniphile kulo msebenzi, uya kuba nakho ukuvelisa umxholo we-SEO onomdla ngokwakho. Kule nqaku, ndiza kuzama ukucima ukungathandabuzeki onakho kwaye kukunikeze ngobuchule bokubhala bokubhaliweyo.
Iingcebiso zokubhala umxholo we-SEO-friendly
Ngaphambi kokuba siqale ukuthetha ngokubaluleka kokuqukethwe kwe-SEO, ndingathanda ukuthetha ngamagama malunga neenjongo ze-SEO ukuvumela uyayiqonda injongo yendlela yokwenza izinto ezilungiselelwe. Injongo ephambili yokukhangela injini yokukhangela ukuqinisekisa ukuba umxholo wakho ubeka kwi-TOP ye-Google SERP. I-bots yokucinga kufuneka iqonde ukuba umxholo wakho uphathelene nani kwaye uyibonise kumbuzo ochaphazelekayo womsebenzisi.
Ukuphucula i-rankings yejini injini, kufuneka ulandele amanye amanyathelo abalulekileyo:
unikezela ngeenkonzo eziphezulu kumgangatho wabasebenzisi bakho;
ukuphucula igunya lakho lolawulo;
yenza ibhizinisi lakho lihlonishwe.
Kukho iindlela ezimbini zokucwangciswa kweenjini zokucwangcisa unokuziphumeza ukulungiselela indawo yakho ngokwendlela yokukhangela injini.
Unokwenza i-SEO yakho ngaphakathi kwendlu okanye uyikhuphe ngaphandle. In-house SEO ifikeleleka kwaye ibandakanye abantu abazi iwebhusayithi. Nangona kunjalo, ukuphucula iindawo zakho zewebhusayithi ngokwakho, kufuneka uqaphele zonke iindlela zokubaluleka okufunekayo kunye nezinto ezintsha zokuthengisa. Inkqubo yokwenziwa komsebenzi kwindlu ingadla ixesha kwaye ngelishwa ilinakuqhamo. Nangona i-SEO ephuma ngaphandle iqhutywe ngugqirha obonisiweyo kule ndawo. Bayazi zonke iinkalo ezibalulekileyo zezinto zokusebenza kunye kwaye banokukunika umxholo ophezulu kakhulu njengoko beyazi ukuba ziphi iinjongo zophando ezilindele kwisayithi lakho. Ngokusebenzisana neengcali ze-SEO zenkampani yesithathu, uya kuba nokufumana iziphumo ezintle zingangeenyanga ezi-3-6.
Namhlanje, ndiya kuzama ukukufundisa indlela yokwakha umgangatho kunye ne-SEO-friendly content ngokwakho kwaye ulondoloze imali yakho kwiinkonzo ze-SEO zokubhalisa. Umxholo olungiselelwe kakuhle akufanele ube nzima okanye uchithe ixesha, ngaphandle kokuba uqonde ukuba ukulungiswa kwamaphepha ekusebenziseni kwiphepha elingasebenza kunye nomxholo wakho. Nantsi indlela yokubhala umxholo we-SEO-friendly ukuba zombini i-bots kunye nabathengi bakho abanokukwazi ukuzonwabisa.
Uphando lwegama elingundoqo liyinxalenye ebalulekileyo kunanoma yimuphi umvuzo we-SEO kunye nezantsi umgca we-SEO umxholo onobungane. Iimpawu eziphambili ezijoliswe kuzo zichonga indawo yakho yewebhusayithi. Ukwenza uphando olungundoqo lwegama elingundoqo, kufuneka ucinge malunga nokuba yiyiphi imibuzo yokukhangela abathengi abanakho abangayisebenzisa ukuze bafumane iphepha lakho lewebhu. Kufuneka uhlakulele i-knack yokuqonda oko abasebenzisi abakulindele kwisayithi lakho. Ukuze ube kwi-TOP yeziphumo zophando, kufuneka ukhethe umsila omde kunye nemigangatho yokukhangela emncinci. Ukwenza lula ukwenza uphando lwegama elingundoqo, unokwenza izixhobo ezinjalo ezizenzekelayo njengeSemalt Auto SEO, iteknoloji yegama elingundoqo okanye i-Google Keyword Planner. Ezi zixhobo ziyakunceda ukuba ungenzi kuphela uludwe lweelwimi eziphambili eziphambili kodwa kwakhona kukunika ingqiqo ngawaphi amagama abalulekileyo abakhuphiswano bakho.
Kakade, akukho sizathu sokuqulunqa umxholo omtsha ukuba ayithembekanga ngokwaneleyo ukuma. Nangona uthatha ingcamango evela kwelinye imithombo, kufuneka unikezele ngembono oyingqayizivele oya kwandisa intlawulo kwisihloko esithile. Ngomxholo-okhupha umxholo, ubeka ingozi ekufumaneni izigwebo ezivela kwiGoogle kwaye unokulahlekelwa zikhundla zakho zendawo. Ngaphezu koko, abasebenzisi abaye babona oku kungabonakaliyo kwimiba eminye imithombo, abayi kuthatha idibansi yakho njengefanelekileyo kwaye ithembekile. Qinisekisa ukuba umxholo wakho uyingqayizivele, ufanelekile kwaye ufikelele ukuhlawulela abasebenzisi kwaye ubaguqulele kubaxhasi bakho. Unokujonga ubungakanani bakho bokuqala ngokusetyenziswa kwezixhobo ezininzi ezisebenzayo ezifana neCopyscape okanye Plagiarism Checker.
Ukulungiswa kwetayitile kunye nokulungiswa
Isihloko sakho sewebhusayithi yinto yokuqala abasebenzisi abangayibona xa bekhangela. Isebenza njengembonakaliso yesiqulatho sakho sesayithi. Isihloko sakho kufanele sibe ngokuchanekileyo, ukubamba kunye ne-SEO-friendly. Qinisekisa ukuba uquka amagama akwii-key and volume-high in titles. Sebenzisa amagama omandla kwaye ugweme ukuphindaphinda ukudala isihloko esicacileyo nesizibandakanyayo. Kufuneka udibanise ulwazi olubalulekileyo malunga neshishini lakho kwiimpawu ezingama-60. Yingakho ndikucebisa ukuba uqikelele izinto ezininzi njengoko unako.
Ngaphezu koko, qaphela i-tags SEO kwaye qinisekisa ukuba usebenzise i-H1 ithegi kuzo zonke izihloko ngaphakathi kwimixholo. Kwakhona isisombululo esihle sokuhlukanisa imihlathi ethile ngemibhalo engezantsi ukwenza ukuba umxholo wakho ufunde lula kwaye uphephe. Kufuneka usebenzise ii-tags ze-H2 kuzo zonke ii-subtitles zakho. Qinisekisa ukuba ufaka amagama angundoqo afanelekileyo kwiibhloko kunye nemibhalo engezantsi ukuvumela i-bots yokukhangela ngokukhawuleza idibanise umxholo wakho ngokukhawuleza.
Ukunika inkqubela kwi-content yakho ye-SEO-friendly, kufuneka ube nee URL ezifanelekileyo. Yenza zonke ii-URL ezingalunganga nezingafundwanga ngokuchanekileyo kwaye zilungiselelwe. Ii-URL ezingenayo nayiphi na ingqiqo ayithwali naluphi na ukubaluleka kubasebenzisi okanye i-Google bots. I-URL ye-SEO-friendly yiyo enegama elingundoqo kuyo. Ngokuphucula ii-URL zakho, uphakamisa ithuba lakho lokuxhaswa ngabaphandi bokukhangela.
Ingcaciso yemeta yombhalo ochaza iwebhusayithi yakho kwaye ibonakaliswe phantsi i-URL yakho yendawo kwindawo yokukhangela. Yona nto yokuqala abasebenzisi bayayifunda ngaphambi kokungena nayiphi na iwebhusayithi. Ingcaciso yakho yemeta kufuneka ibandakanyeke kwaye ifanelekile kumxholo wakho wewebhu ukwenzela ukuba abasebenzisi balandele isayithi lakho ngolwazi olungakumbi. I-meta-description echanekileyo ingakunceda ukuba ukhulise ukukhawula-rate-rate kwaye uphinde uphucule i rankings kwiwebhusayithi.
Iziqhagamshelo zangaphakathi kunye zangaphandle
Izixhumanisi zangaphakathi zibonisa ukuba isayithi lakho lihlonishwa kwintsimi ethile. Ngokufezekisa izixhumanisi zangaphakathi, udala ulandelelwano olunengqiqo ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye. Ukudibanisa kuya kuphucula ukufaneleka kwesiza sakho ngokunika ixabiso elongezelelweyo kwamanye amanqaku athile. Ngaphezu koko, kuya kunceda ukukhangela ibhola ukuqonda izihloko zakho eziphambili.
Izixhumanisi zangaphandle kwikota yazo zibonisa igunya lakho lolawulo kunye nokuphucula ulwazi lwenkcazelo yakho. Izixhumanisi zangaphandle zibonisa iinjongo zokukhangela ukuba umxholo wakho ubunjani njengoko ulwabiwo ngabasebenzisi kunye neminye imithombo yewebhu edibeneyo. Kunengqiqo ukubeka iikhonkco zakho kwiindawo ezihloniphekileyo kunye ezihlala zihlala ixesha elide kuba ezi zixhumanisi zinokuthenjwa.